स्वाथ्य - Jankari Nepal
गर्भवती भएका बेला याैन सम्पर्क गर्न मिल्छ? जान्नुह‍ोस्
Post date ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १६:००
गर्भवती महिलाहरू पेटमा बच्चा बसेको समयमा निकै सावधानी अपनाउछन् । त्यस्तो अवस्थामा सामान्य चोट लाग्दा पनि बच्चा खेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यहि कारण हुनसक्छ अधिकांश महिला एवं पुरुषहरु गर्भवती रहेको समयमा यौन सम्पर्क राख्न चाहदैनन् । चिकित्सकका अनुसार गर्भवती भएको बेला महिलाको शरीरमा हर्मोनहरु अदल बदल भइरहेको हुन्छ । यो अवस्थामा महिलालाई यौनको भोक बढी […]
यस्ता पुरुषसंग यौन सम्बन्ध बनाउन लालायित हुन्छन् युवती
Post date ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०९:१०
एक अध्ययनले सुन्दरता भन्दा पनि सुगन्धले मानिसको यौन जीवनमा प्रभाव पार्ने तथ्य फेला पारेको छ। कसैलाई ‘सेक्सुअल्ली अट्रेक्ट’ गर्न पैसा, सुन्दरता तथा फिगरलगायत कुरा तपाईको सुगन्धको अगाडि सब बेकार हुन सक्छन् । एक्स्ट्रा मेरिटल डेटिङ साइट भिक्टोरिया मिलनले १२ देशका ती मानिसमाथि अनुसन्धान गरेको थियो, जो आफ्नो पार्टनरसँग चीट गरिरहेका थिए । उनीहरुको उक्त धोकेबाजीको […]
महिनावारी सन्तुलित बनाउन अचुक घरेलु उपाय
Post date ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:५४
महिलालाई महिनावारीमा असन्तुलन हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रायः महिला चिन्तित हुन्छन् । तर, सामान्य घरेलु उपायबाट पनि यसको समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता छन घरेलुउपायहरू – मुलाको बिउलाई पिसेर पानीसँग दैनिक आधा चम्चा खाँनु । – मुला, भटमास, मेथी र गाँजरको मिश्रणबाट जुस बनाई पिउँनुस् । – गुड र तिलको लड्डुको प्रयोग गर्नुस । – महिनावारीमा विभिन्न […]
Post date ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:४६
धेरैजसो मानिस मधुमेहको समस्या भएर अस्पताल पुग्नु पर्छ। हाम्रो शरीरमा अधिकांश रोग हाम्रै जीवनशैलीका कारण लाग्ने गर्छन् । सन्तुलित खानपान, नियमित व्यायाम गरेको खण्डमा मधुमेहबाट बच्न सकिन्छ । मधुमेह रोग लागेकाले खानेकुरामा अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ । मधुमेह लागेकाले खानामा ध्यान दियो भने बिस्तारै यो नियन्त्रण हुँदै जान्छ । अब जानौँ, मधुमेह रोगीले खाने खानाबारे । […]
महिनावारी हुँदा यौन सम्पर्क राख्नु कति उचित ? जान्नुहोस्
Post date ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:४१
के तपाईं महिनावारी हुँदा यौन सम्पर्क राख्नुहुँदैन भन्ने सोच्नुहुन्छ ? त्यस समय योनिको वरिपरि धेरै फोहोर हुने भएकाले यौन आनन्द लिन सकिँदैन भन्ने धारणा छ भने यो गलत हो । महिनावारी हुँदा यौन सम्पर्क राख्नु साधारण कुरा हो । यदि तपाईंले हालसम्म यसको अनुभव बटुल्नुभएको छैन भने एकपटक यसको अनुभव लिनु आवश्यक छ । किनकि […]